Qubanaha » Shirkadaha oo loo ogolaaday in ay mamnuucaan xijaabka
Shirkadaha oo loo ogolaaday in ay mamnuucaan xijaabka
Shirkadaha wadamada EU ayaa lo ogolaaday in ay mamnuucaan calaamadaha diinta, tusaalahaan ayaa shirkadaha surtogal looga dhigay in ay diidan hablaha xijaabka xidhan.
Go´aankan ayaa ka yimid maxkamada EU dhowaan.
Xukunkan ayaa ka dhashay wadamada Fraansiiska iyo Belgium halka laba kiis oo arrimahan la xidhiidha maxkamad la soo saaray. Waa laba gabdhood oo ka dib ay shaqadu ka mamnuucday in ay xijaab u soo gashadaan shaqada hadana soo xidhay.
Mid ka mid ah shirkadahan ayaa u jeeda in ay shaqadu tahay meel ay dadku ku simanyahiin oo aan diinta lagu soo bandhigi karin halkey shirkada kale dhaleecayn ka heshay mid ka mid ah dadkii halkaas wax ka iibsanayey.
-Xukunkan ayaa ka dhigan in hablaha qaar tusaalahaan kuwa xijaaban ka shaqeeyn karin shirkadaha diida labiskooda, ayuu sheegay Martin Mörk oo ka hawlgala hayadda ka hor-tagga cunsuriyadda ee DO loo soo gaabiyo.
Khadra Seerar ayaa fikirkeeda ka dhiibanaysa xukunka cusub ee maxkamada EU
Xigasho Radio svarie